ENUGWU NỌ N’AKA UGWUANYỊ – hoo!haa!!
ENUGWU NỌ N’AKA UGWUANYỊ
Ụnyahụ, ụbọchị Wenezdee, abalị iri n’anọ nke ọnwa Ọgọọst, obi tọrọ mmadụ nile ụtọ nke ukwuu mgbe a nụrụ na Gọọmenti Enugwu Steeti agaghịkwa etikpọ ọgba ụfọdụ dị n’Okpuru Ọchịchị Ọ̀gwụ̀ maka ihi nchekwa.
Ụta adịghịkwara Gọvanọ Ifeanyịchukwu Ugwuanyị, dịka aka na-achị Enugwu Steeti ime ihe ọbụla ga-eme ka e nwee ezigbo nchekwa na steeti ya maka na ọrụ mbụ dịịrị onye ọchịchị ọbụla bụ nchekwa ndụ nakwa akụnụba ndị ọ na-achị.
Udiri mkpa mkpa ndị ntọ ndị Fulani kpara n’Enugwu na nso a zuru ime ka mmadụ mee ihe ọ chọbughi ime.
A na-ekwu na a gbagburu Fada Pọl Ofu, a tọrọkwuo Eze ọdịnala ndị Ụmụobom-Agbogwugwu, Igwe Sọnde Ọjị na Lọlọ ya.
Ndị ụkọchukwu Katọliki nupuru Nna Ụkọchukwu na Dayọsis Enugwu, Bishọọpụ Kalistus Ọnaga isi were pụọ njem ngagharị iwe. Udiri a emebeghi mbụ!
Ọ bụ eziokwu na “agbaghị ụzọ azụ owere mgba, ọ gaghị echi” mana “ejighị iwe oke esu ụlọ ọkụ”.
Gọvanọ Ugwuanyị gosiri na ọ bụ ezigbo onye ndú site na ige ntị mgbe ọtụtụ mmadụ tikporo ya mkpu maka ya bụ ntikpọ a chọburu itikpọ ọgba ndị ahụ dị n’Ihe, Agbụdụ nakwa Isu-Awaa.
Kama, Gọọmenti Enugwu Steeti kpebiziri idozigharị ọgba ndị ahụ ka ha bụrụzịa ihe nkiri anya nke nwere ike itozu ogo ịbanyezị n’akwụkwọ otu mba ụwa dịka UNESCO Heritage sites.
Kaọdịtaa, mba Ịtali bụ otu mba a maara na-enweta ego gbara ọkpụrụkpụ site na ndi nkiri anya si mba ụwa dị iche iche abịa ileta ọgba dịgasị ebe ahụ.
Ọgba ndị ahụ nwegasịrị akụkọ ndị mgbe ochie so ha n’azụ, ọ kacha ka o si metụta mmalite ụka Kraịstị. Ọgba ndị ahụ bụ ebe ndị otu Kraịstị zoro mgbe Ezeukwu na-achị oke ala-eze Rom bụ Siza chọrọ igbuchapụ ha.
N’otu aka ahụkwa, ndị Ịtali zolakwara n’ime ọgba ndị ahụ oge ndị agha Adolf Hitla, onye ndú ndị Jamani obi pụrụ azụ chọrọ ịla ndụ ha n’iyi.
Otu ihe pụtara ìhè n’okwu a bụ na Gọọmenti ọbụla chọrọ inwe agamnihu ga na-ege ụmụ amaala ya ntị iji mata uche obi ha.
Keduzi ihe mere na ụjọ anaghị ekwe ndị ntorobịa Enugwu Steeti kwupụta uche obi ha ebe ọ bụ na Gọvanọ Ugwuanyị bụ onye ọ na-agụ agụụ ịmata ihe na-akpa ndị Enugwu Steeti?
Kama ịgwa Gọvanọ ihe na-eme n’obodo, ndị ndu ndị ntorobịa na steeti ahụ na-echewezị ntị ịnụ ihe o nwere ịgwa ha nakwa ịgwa ya ihe ha chere na ọ chọrọ ịnụ.
Kaọdịtaa, kemgbe ọchịchị gara aga na steeti ahụ rere ogige ụmụ anụmanụ (zoo) ma tikpọkwaa ogige ezumike ndị ọzọ dị n’Enugwu dịka Ogige ezumike Muritala Mohammed, Ejindụ nakwa Nnaji, o nweghịzị ebe ije mkpagharị dị n’Enugwu.
Ụlọ nkwari akụ Hotel Presidential so n’ejirimara Enugwu bụkwa ihe ịgba anya mmiri ugbua.
Ekele ga agakwara Ugwuanyị maka ohere o nyere agbara nwanyị, Lọlọ Chinwe Rita Mba, onye bụbu Kọmishọna na-ahụ maka Omenala nakwa Njem Nlegharịanya na steeti ahụ maka imekwa ka ụlọ nkwari akụ Nike Lake dịkwa mma ile anya nakwa ịga njem nlegharịanya ọzọ.
Gọvanọ ahụ gbakwara mbọ ka dimkpa site na ịzọpụ ije, were anya ya hụ ma werekwa ụkwụ ya baruo n’ime oke ọhịa tinyekwara ọgba ndị ntọ ahụ si ezokpu ma na-agbalagakwa.
Ọ malitekwara nghazigharị ndị nche ógbé (vigilante) na steeti ahụ tinyekwara iwegara Ụlọ Nzukọ Omebeiwu Steeti ahụ atụmatụ iwu ọhụrụ megidere ntọrị bụ “Anti-kidnapping bill”.
Ruo taa, ihe na-edobeghi ọhaneze anya bụ ihe dị iche n’etiti iwu ọhụrụ a na nke Gọvanọ Sụlivan Chime tinyere aka na ya nke mere ka ntaramahụhụ dịrị ntọrị n’Enugwu Steeti bụrụzịa nkwụgbu.
Ọzọkwa, puku Naira ise n’ụma Gọọmenti steeti ahụ chọrọ ịna-akwụ ndị nche ógbé agaghị aga chaa chaa. O ziri ezi ịkwụ ha opekata mpe Puku Naira iri kwa ọnwa iji mee ka ha hụ ume ha ji afụnwute ọkụ.
Ihe ọzọkwa bụ na ndị nche ọhịa (forest Rangers) a na-ekwu okwu ihiwe ekwesịghị ịdị iche kama nchekwa ọhịa kwesịrị iso n’ọrụ ndị nche ógbé.
Inwe ndị nche ọhịa iche nwekwaa ndị nche ógbé iche ga-ebute mgbagwoju anya dịka nke dị n’etiti ndị Uwe Ojii na ndị ogbo ha a kpọrọ ndị “Civil Defence”.
Ebe ha bụ “Civil Defence”, ndị uwe ojii abụzị “military Defence”? Ọtụtụ oge, otu ọrụ nchekwa abụọ a na-azọbite onwe ha ọkpa mana akụkọkwa isi, ebe ha na-azọ onye kwesịrị ịrụ nke ọ ga-arụ.
N’ógbé ọbụla, n’ime obodo, e nwere “ụmụ amagụ”, ụmụ okorobịa na-agbakọ na “nkọrọ”, ebe ha nọ were ígbó na-esewa isi ma na-echekwa ụzọ ha ga-esi “bute ike”.
Gọọmenti Enugwu Steeti kwesịrị iso ha site n’usoro “Onye jụ ùdò, o kuru ogwugwu ṅụọ” nke bekee kpọrọ “carrot and stick approach”
Kama ịhapụ nkọrọ ndị ahụ ka ha bụrụ nnọkọ ndị ekperime, ndị uwe ojii na ndị ọrụ nchekwa ndị ọzọ kwesịrị ịwakpo ha site n’enyemaka ndị isioche Okpuru Ọchịchị dị iche iche. Ndị n’ime ha gosiri nchegharị ga-anatazị ọzụzụ maka isonye na ndị nche ógbé. Nke bu eziokwu bụ na-eriri ma ngwugwu, ma ngwugwu ma onye kere ya. O nweghị onye ga-aka ha mara ụzọ ọhịa nakwa ụzọ azụ owere.
N’aka nke ọzọ, ndị jụrụ ịnara ohere nchegharị n’aka Gọọmenti ga ewerezi ihe ha hụrụ.
Dịka Ọkaiwu Chima Obieze, onye nnọchiteanya mpaghara Ezeagụ n’Ụlọ Nzukọ Omebeiwu Enugwu Steeti siri tụọ n’alo, ndị dinta bụ ndị ọzọ dịkwa mkpa n’ọrụ nchekwa. Ha ji ọhịa mere ụlọ ọrụ. N’ihi ya, enye ha nkwado zuru oke, ha ga-enye aka ibuso ndị ntọ agha.
Iji mejupụta ihe ndịa nile, Gọọmenti Enugwu Steeti nakwa nke ọkpụrụkpụ ọchịchị nile nọ na steeti ahụ kwesịrị ịmapụta ego gbara ọkpụrụkpụ maka na “ndụ bụ isi akụ”.
N’agbanyeghị ọgbata uhie ndị gọvanọ steeti na-enwe nke sitere na mgbagwoju anya banyere ikike ha nwere ka ndị nchekwa Steeti ha etu iwuala (Constitution) Naịjiriya nke afọ 1999 siri dị, gọvanọ ọbụla kwesịrị ịna anwa ike ya ruo mgbe e nwere nghazigharị usoro ọchịchị (Restructuring) n’ala anyị iji dozie ihe ndị gbagọrọ agbagọ.
Dịka ndị ụka, o doro anya na ọ bụ Chineke na-eme eze. Mana, Chineke ndị Enugwu na-ahụ anya ugbua bụ Ifeanyịchukwu Ugwuanyị. Ụgwọ ụmụ amaala Enugwu Steeti jizi bụ ịna etinye ya n’ekpere, ka Chineke nọnyere ya n’oke ọrụ ịchịkwa nakwa ichekwa Steeti ahụ nke ọ họọrọ site na ịbụ aka na-achị steeti ahụ.
N’ezie, Enugwu nọ n’aka Ugwuanyị, hoo!haa!!
Previous Post: MWEGHARA AKỤNỤBA:NWAOBOSHI ARỊỌLA ỤLỌIKPE KA Ọ KAGBUO YA
Next Post: ONYE KEKE EZIGBO MMADỤ NA-EWEGHACHI IHE E CHEFURU NA KEKE YA